ယခုတစ်ပတ်ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ် (၄) အပြီးမှာ ဘိုင်ယန်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ PSG တို့ကတော့ ယခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်ကို ပထမဆုံး တက်လှမ်းနိုင်သူတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ၃သင်းသာ တက်သေးတာကြောင့် ၁၆သင်းအဆင့်ကို ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ဖို့ ၁၃နေရာ ကျန်သေးပြီး ဘယ်အသင်းမဆိုတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတာကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်တဲ့ နှစ်လို့တောင် ...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပန်းဖြေခရီးသွားတယ်ဆိုတာ၊ တချို့က ကမ်းခြေမှာ ထိုင်ပြီး၊ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ အရက်သောက်၊ ဂိမ်းဆော့ပြီးနေတာမျိုးကိုခေါ်သလို မိမိအသက်ကိုတောင်မငဲ့ကွက်ပဲ စွန့်စားခန်းဖွင့်ချင်တဲ့လူအချို့အတွက်တော့လည်း သက်စွန့်ဆံဖျား နေရာတွေကိုသွားရောက်ချင်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုလူစွန့်စားတွေအတွက် အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုပ်ပြီး သွားရနိုင်လောက်တဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က အန္တရာယ်အကြီးဆုံးနေရာတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲက ခရီးစဉ်အချို့ဆိုရင် အန္တရာယ်များလွန်းလို့ ခရီးသွားတွေကို သွားရောက်ခွင့်လုံးဝ ...
လူအများစုက ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သန့်ရှင်းတဲ့ လေကို ရှုရှိုက်ဖို့ နဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့ အတွက် ကမ်းခြေကို သွားတတ်ကြပါတယ်။ ကမ်းခြေရောက်တဲ့ အခါ အရမ်းလှတဲ့ ရူခင်းတွေနဲ့ အထာကျကျ ဓာတ်ဖမ်းဖို့ အတွက်ဆိုရင် အမိုက်စား ဝတ်ဆင်တတ်ဖို့လည်း လိုတယ်နော်…ဒါကြောင့် ကမ်းခြေသွားရင် ဝတ်ဆင်သင့်တဲ့ ...
Disney က ထုတ်လုပ်ပြသမယ့် Star Wars စီးရီးရဲ့ ရှိုးအသစ်ဖြစ်တဲ့ The Mandalorian ရဲ့ Disney + ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာပဲ ထုတ်ဖော်လိုက်ပါပြီ။ Trailer အသစ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ပြကွက်၊ ရိုက်ကွက်တွေနဲ့အတူ အာကာသအတွင်း စွန့်စားခန်းတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ ...
မနက်အိပ်ယာထပြီး စတွေးသင့်သော အချက်များကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ ၀၁. ရွေးချယ်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေအားလုံးဟာ ကိုယ့်မှာရှိတယ်။ ဒီနေ့ဟာ ကောင်းတဲ့နေ့၊ မကောင်းသောနေ့ဖြစ်တာတို့၊ ရာသီဥတု သာယာမယ်၊ မသာယာဘူးဆိုတာကို တွေးနေစရာမလိုပါ။ ကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ဖို့ရန် မိမိသာလျှင် အဓိကပါ။ ၀၂. အဖြေက အရေးမကြီးပါ။ လူတိုင်းက ကိုယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရန်၊ ကိုယ့်အလုပ်အောင်မြင်ရန်သာ အလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ ...